How to create and uploadatorrent? | TechSectors
တစ်ချို့က Torrent ဆိုတာကို ကြားပဲ ကြားဖူးတယ် မသုံးဖူးဘူး - တစ်ချို့ကကျတော့ သုံးနေတယ် - ဒါပေမယ့် Torrent ရဲ့ သဘောတရားကို သေသေချာချာ မသိဘူး - ဒေါင်းလုပ်ချလို့ရပြီးရော ပုံစံမျိုးနဲ့ သုံးနေတယ် - တစ်ချို့ကကျတော့ Torrent ကို သုံးကြည့်ချင်တယ် ဒါပေမယ့် မသုံးတတ်ဘူး - ဒီလိုလူတွေ အားလုံးအတွက် Torrent အကြောင်းကို အပြည့်စုံဆုံး ဖြစ်အောင် လနဲ့ချီပြီး ရေးခဲ့တဲ့ What is Torrent ? ဆိုတဲ့ post တစ်ခု ရှိတယ် - ဒါပေမယ့် Torrent က လေ့လာရင် လေ့လာသလောက် ကျယ်ပြန့်နေတုန်းပဲ - အခုလည်း Torrent ဘာလဲဆိုတာ သိပြီး သုံးတတ်သွားတော့ Torrent Upload တင်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဆိုပြီး မေးလာကြတာ ရှိတယ် - သူတို့တွေကို နိုင်သလောက်ကူညီရင်း တစ်ခြားသူတွေလည်း လေ့လာနိုင်အောင် ဒီမှာ ဖော်ပြလိုက်တယ် -
Originally Posted by phoetharlay
အကိုKznt ခင်ဗျာ ကျွန်တော်မသိတာလေးမေးချင်လို့ပါ အခုအကိုရေးထားခဲ့တာက Torrent ကနေဒေါင်းလုတ်ချနည်းတို့ ဖိုင်ရွေးချယ်နည်းတို့ပေါ့နော် အခုကျွန်တော်မေးချင်တာလေးက Torrent မှာ ဘယ်လို Upload တင်ပေးလို့ရလဲဆိုတာတွေကို အကိုနားလည်မယ်ဆိုရင်ရှင်းပြစေချင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ Torrent ကနေဒေါင်းလုတ်ချတာအဆင်ပြေတယ်ဗျ လူပင်ပန်းတာသက်သာတယ် ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို Upload တင်မယ် ဘယ်လို လင့်တွေကိုယူမယ် ဖိုရမ်တွေ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေမှာဘယ်လိုတင်မယ်ဆိုတာကိုဖြစ်နိုင်ရင် အကိုခင်ဗျာဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ် ..........
ဟုတ်ကဲ့ မေးထားတာတော့ ကြာပါပြီ - ချက်ချင်း ပြန်ဖြေပေးဖို့အတွက် အချိန်မလုံလောက်တာရယ် ပြောရင်လည်း အကြောင်းအရာက ရှည်မှာမို့ သေသေချာချာ အားမယ့် တစ်ရက် စောင့်နေရင်း ကြာသွားတာပါ - Torrent မှာ Upload တင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်က ကျွန်တော်တို့ ပုံမှန် Uploading ဆိုဒ်တွေမှာ Upload တင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေထက် မသိရင် ပိုပြီး ရှုပ်တီး ရှုပ်ရှက် နိုင်သလို - တော်တော်လည်း စိတ်ရှည်ရပါတယ် - အဆင့်တွေလည်း များသလို - ကန့်သတ်ချက်တွေလည်း တော်တော်များပါတယ် - နောက် Torrent site တွေ မတူရင် သလို - ကန့်သတ်ချက်တွေ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကလည်း မတူပါဘူး - ကျွန်တော်က Demonoid.me မှာ Torrent upload တင်လေ့ ရှိပါတယ် - နောက် ကျွန်တော် အမြဲ သုံးနေကျ H33T မှာလည်း ကျွန်တော် upload တင်ပေးလေ့ ရှိပါတယ် -
အဲ့မှာ ကျွန်တော် စသိခဲ့တာက Torrent site တွေဟာ သူတို့ ဆိုဒ်တွေကနေ တစ်ဆင့် upload တင်ချင်ပြီ ဆိုရင် ပထမအဆင့် ဆိုဒ်ကို အရင်ဝင်ရမယ် - အဲမှာ တစ်ချို့ဆိုဒ်တွေက Acc ရှိပြီး login ဝင်လိုက်တာနဲ့ trackers ကိုယူပြီး တန်းတင်လို့ ရတာရှိတယ် - တစ်ချို့ကျတော့ Acc ရှိလည်း ချက်ချင်း တန်းတင်ခွင့် မပေးဘူး - သူတို့ ဆိုဒ်တွေကနေ တစ်ဆင့် upload တင်ချင်ရင် ခွင့်ပြုချက်ဆိုတာ သက်ဆိုင်ရာ ဖိုရမ်မှာ ထပ်တောင်းရတယ် -
- နောက်ထပ် လိုက်နာရမယ့် စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းဆိုတာတွေ ရှိသေးတယ် - ဥပမာ - ဘယ်ဖိုင် မတင်ရ - ဘာဖိုင်တင်ရင် ဘယ်ကွာလတီပြည့်ရမယ် - ဒီကောင်ရဲ့ အကြောင်းအရာက ဘယ်လို - ဘယ်နေရာမှာ အသုံးချနိုင်တယ် စသဖြင့် အသေးစိတ် ဖော်ပြရတာမျိုးရှိတယ် - ဆိုဒ်က ဘယ်ဖိုင်ပါထည့်ပေးရမယ် ဆိုရင် သူတို့တောင်းဆိုတဲ့ ဖိုင်ကိုပါ ထည့်ပေးရတာမျိုးတွေလည်း ရှိသေးတယ် - တစ်ချို့ဆိုဒ်က rule ရှိပေမယ့် လိုက်မလုပ်လည်း ဘာမှ မပြောဘူး - တစ်ချို့ကျတော့ သတိပေး - မလိုက်နာရင် permanently banned တယ် -
ဆိုဒ်အားလုံးက တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းချင်း မတူတာမို့လို့ ကျွန်တော် တစ်ခုချင်းစီတော့ လိုက်ပြဖို့ မလွယ်ပါဘူး - ဒါပေမယ့် Upload တင်နည်း သဘောတရားကိုတော့ ခြုံငုံမိအောင် ဖော်ပြပေးပါ့မယ် - ဆိုကြပါစို့ Demonoid.me နဲ့ ဒီနေရာမှာ ဥပမာ ပေးသွားပါ့မယ် -
( ၁ ) - ကျွန်တော်တို့မှာ Demonoid.me အကောင့်တစ်ခုရှိတယ် - အဲတာဆို အကောင့်ထဲ ဝင်ထားလိုက်ပါ ( Demonoid.me အကောင့်က လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်လို့ မရဘူး - သူက Registration ကို ဖွင့်ချင်တဲ့ အချိန်ဖွင့်ပြီး ပိတ်ချင်တဲ့ အချိန် ပိတ်တယ် - သုံးဖူးသမျှ torrent sites တွေထဲမှာ Demonoid.me နဲ့ Piratebay ကို သဘောအကျဆုံးပဲ - )
( ၂ ) - နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ ကိုယ့် ကွန်ပြူတာထဲက ကိုယ်ဝေမျှချင်တဲ့ ( Torrent မှာ Upload တင်ချင်တဲ့ ) ဖိုင်တွေကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖိုဒါအောက်မှာ စနစ်တကျ စုစည်းပြီး torrent sites တွေအလိုက် သူတို့ သူကန့်သတ်ထားတဲ့ ဘယ်ဖိုင်ပါ ထည့်ပေးရမယ် ဆိုတဲ့ ဖိုင်ကိုပါ ကိုယ်ဝေမျှချင်တဲ့ ဖိုင်တွေနဲ့ အတူ ယှဉ်လျှက် ထည့်ထားရပါမယ် - ( ဆိုလိုတာ Demonoid.me မှာဆို သူ့ဆိုဒ်ကနေ Torrent upload တင်ချင်တယ် ဆိုရင် အောက်မှာ မြင်နေရတဲ့ "Torrent download from demonoid ...." ဆိုတဲ့ txt ဖိုင်တစ်ခုပါ ထည့်ပေးရတာမျိုးပါ - သူက အဲတာမပါရင် upload က အလိုလို reject ဖြစ်ပါတယ် )
( ၃ ) - နောက်တစ်ဆင့်မှာ uTorrent ကိုဖွင့်ပါ - ( တစ်ခြား torrent apps တွေကလည်း Upload တင်ဖို့ သုံးလို့ ရတာရှိပါတယ် - ဒါပေမယ့် uTorrent က သုံးရပိုလွယ်ပါတယ် ) နောက် Menu က File -> Create new torrent ကို click ပေးပါ - အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း မြင်ရပါလိမ့်မယ် -
( ၄ ) - နောက်တစ်ဆင့် အနေနဲ့ "Add directory" ကို နှိပ်ပြီး အဆင့် ( ၂ ) မှာ Torrent upload တင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ စုစည်းခဲ့တဲ့ directory ကို copy ကူးပြီး ထည့်ပေးရပါမယ် - "Trackers:" ဆိုတဲ့ နေရာမှာတော့ သက်ဆိုင်ရာ Torrent sites တွေအလိုက် torrent upload စာမျက်နှာမှာ ရှိနေတဲ့ http နဲ့ စတဲ့ tracker list ကို ထည့်ပေးရပါမယ် - Demonoid အတွက်ကတော့ ဒီကောင်ပါ - http://inferno.demonoid.me:3411/announce ပါ - tracker list ထည့်တဲ့ နေရာမှာ Demonoid က ပေးထားတဲ့ tracker တစ်ခုတည်းတင် မကပဲ တစ်ခြား public trackers တွေကိုလည်း တစ်ခါတည်း ထည့်လို့ ရပါတယ် - "Comment" ဆိုတဲ့ နေရာမှာတော့ ကိုယ့် Torrent အကြောင်း အတိုချုံး မိတ်ဆက်လေး ရေးထည့်ပေးပါ - နောက် "Start seeding" မှာ အမှန်ခြစ် ပေးပါ - နောက်ဆုံးမှာ "Create and save as" ကို click ပေးပြီး ကိုယ့်ကွန်ပြူတာထဲက တစ်နေရာရာ ( Desktop ပေါ်မှာ ) သိမ်းလိုက်ပါ - အဲကောင်လေးကို ကလစ်ပေးလိုက်တာနဲ့ .torrent နဲ့ ဆုံးတဲ့ ဖိုင်သေးသေးလေး တစ်ခု ရလာပါလိမ့်မယ် - ပြီးရင် "Close" လိုက်ပါ - မပြီးသေးပါဘူး - နောက်ထပ်ကျန်ပါသေးတယ် -
( ၅ ) - အဲလိုလုပ်ပြီးသွားတာနဲ့ uTorrent's list ထဲမှာ ကိုယ်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ torrent လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် - တကယ်လို့ torrent ရပ်သွားရင် right click ပေးပြီး "Force start" ကို ရွေးပေးပါ -
( ၆ ) - အဲလိုလုပ်လိုက်ရင် error message တစ်ခု အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း တွေ့ရပါလိမ့်မယ် - အဲတာ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ သက်ဆိုင်ရာ Torrent upload sites ( ကျွန်တော်တို့ခုလုပ်နေတာ Demonoid ) မှာ .torrent နဲ့ ဆုံးတဲ့ ဖိုင်လေးကို upload မတင်ရသေးလို့ပါ - သူ့ကို ဒီအတိုင်း ခဏမေ့ထားပြီး အဆင့် ( ၁ ) မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ Demonoid.me ကို ပြန်သွားပါ -
( ရ ) - Menu မှာ မြင်နေရတဲ့ Uploadatorrent ဆိုတဲ့ tab ကို ဝင်ပြီး "I understand and agree to the rules" ကို အမှန်ခြစ်ပေး - "torrent category" ကို ရွေးပေးပြီး ရှေ့ဆက်သွားရင် အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်းေ တွ့ရပါလိမ့်မယ် -
( ၈ ) ဒီအဆင့်မှာ အထက်က ပုံမှာပြထားတဲ့ "browse" button ကနေ အဆင့် ( ၄ ) မှာ ကျွန်တော်တို့ Create လုပ်ထားတဲ့ .torrent ဖိုင်လေးကို ရွေးပေးပြီး - ကျန်တဲ့ အပိုင်းတွေမှာ သူဖော်ပြထားချက်အတိုင်း ဖြည့်ရမှာလေးတွေ ဖြည့်ပေး - ရွေးပေးလိုက်ပါ - ဘာတွေလုပ်ရမလဲ ဆိုတော့ name ဖြည့်ရမယ် - ကိုယ့် torrent နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ မိတ်ဆက် သဘောမျိုး description ဖြည့်ရမယ် - အဲ့ဒီ description က at least 30 characters long ဖြစ်ရမယ် ( ဆိုဒ်တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု မတူ ) စသဖြင့် စည်းကမ်းတွေ လိုက်နာပြီး ဖြည့်သွင်းရပါမယ် -
( ၉ ) - နောက် tracker နဲ့ ကိုယ့် torrent ချိတ်ဆက်မိအောင် ၃ မိနစ်လောက် စောင့်ပြီး ခုနက ကျော်ခဲ့တဲ့ အဆင့် ( ၆ ) က uTorrent ကို ပြန်သွားပါ - torrent ပေါ်မှာ right click ပေးပြီး "Update tracker" ကို click လိုက်ပါ - အဲလိုဆို နောက်ဆုံးမှာ "Tracker status: Working" ဆိုတာကို အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆို ကိုယ့်အနေနဲ့ Torrent upload လုပ်ဆောင်ထားပြီးပါပြီ -
( ၁၀ ) - Torrent upload လုပ်ဆောင်ထားပြီးပြီ ဆိုပေမယ့် ဒီ သဘောတရားက ကို g00gle မေးတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ ဆက်စပ်သွားပြန်ပါတယ် - ဟိုး အပေါ်မှာတော့ ဖော်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ - ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ပြောပေးပါ့မယ်
ကျွန်တော် မသိလို. တခုလောက်မေးချင် လို.ပါ။ တကယ်လို. ကိုယ်က seed လုပ်တာ 100% ပြည်.သွားပြီ။
နောက် ကျွန်တော် က ကိုယ် download လုပ်ထားတဲ. file ကော၊ torrent file ကိုပါဖျက်လိုက်တယ်။
ဒါဆိုကော ကိုယ် seed လုပ်ထားတာ အလကားဖြစ်သွားသလားဆိုတာ သိချင် ပါတယ်။
Torrent upload လုပ်ဆောင်ထားပြီးပြီဆိုပေမယ့် Torrent uploading ဆိုတဲ့ သဘောဟာ 100% ပြည့်တယ်ရယ်လို့ ပြောလို့ မရပါဘူး - ကိုယ်က အပေါ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ နည်းအတိုင်း upload လုပ်ထားပေမယ့် ကိုယ် share လုပ်ထားတဲ့ ဖိုင်ကို တစ်ယောက်ကမှ ပြီးဆုံးအောင် Download မဆွဲဘူးဆိုရင် အချိန်တွေသာ ကြာသွားမယ် တစ်ယောက်မှ Seed မဖြစ်တဲ့ အတွက် 100% ပြည့်တယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး - တကယ်လို့ ဆွဲသွားတယ်ပဲ ထား - ကိုယ့်ဆီက ဆွဲသွားတဲ့ သူက Seeder အဖြစ် ပြန်လုပ်မပေးဘူး ဆိုရင်လည်း ရတဲ့သူ အရေအတွက်သာ တိုးသွားမယ် နောက်တိုး Seeder မရှိတဲ့ အတွက် ကိုယ်က ဒီ Seeding လောကကနေ ထွက်လို့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး - ထွက်လိုက်ရင် ကိုယ် seed လုပ်ထားတာ အလကားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် - နောက်ထပ် ဘယ်သူမှ ရနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး - ထွက်ချင်ရင် ကိုယ် Upload ပေးထားတဲ့ ဖိုင်ကို လူဘယ်နှစ်ယောက်လောက် ရပြီးသွားပြီလဲ - သူတို့ကရော တကယ် Seed ပြန်လုပ်ထားရဲ့လား ဆိုတာ ဆန်းစစ်လေ့လာပြီး - ကိုယ့်ရဲ့ Ratio က ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ ဆိုတာ ကြည့်ပြီးမှပဲ ထွက်ရပါမယ် - ပြောရရင်တော့ ကိုယ့်ဖိုင်ကို လိုချင်တဲ့သူများတယ် - Download လည်းဆွဲကြတယ် - ရသွားတဲ့ သူတွေကလည်း Seed ပြန်လုပ်ပေးတယ်ဆိုရင် Seeder များသွားလို့ ကိုယ်ထွက်လည်း အကြောင်းမဟုတ်ပေမယ့် - Download ချပြီး Seed မလုပ်ပဲ ပြေးတဲ့သူ များနေတဲ့ အချိန်မှာ ကိုယ်ကပါ Seeding လုပ်တာ ရပ်ပစ်လိုက်ရင် ကျန်တဲ့သူတွေပါ ဒုက္ခရောက်မယ့် အခြေအနေပါ - ဂျာအေးသူ့အမေရိုက် - မုန့်လုံးစက္ကူကပ် အခြေအနေမျိုးပေါ့ -
ကျွန်တော်ခု ဖော်ပြခဲ့သလောက်ဆို Torrent upload ဘယ်လိုတင်တယ်ဆိုတာနဲ့ Seed သဘောတရားကို ပိုနားလည်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ် -
FAQs How to Internet Torrent